သတင်းစုံ - Download Facebook Videos - GenFK.com
FB URL: https://www.facebook.com/news.com.mm/
နယ်​​မြေခံရဲတပ်​ဖွဲ့ဝင်​ဟု​ပြောသူနှင့်​ ယာဉ်​ထိန်းတို့ ​တွေ့ကြ​လေ​သောအခါ ဘယ်​သူမှားတယ်​ ဘယ်​သူမှန်​တယ်​.. ​ဝေဖန်​​ကြည့်​​ပေါ့😁😁 ​နေရာ ​လောက်​ကိုင်​မြို့ Video #crd Sai Khwan Khay
သွားပြီ..😡 စုတ်ပြတ်နေတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ နဲ့ အတူ လုံးဝပျက်စီးနေတဲ့ ရွံစရာ အရမ်းကောင်းတယ် 😖
အားလုံး ကြည့်သင့်တယ်ထင်လို့ပါ.. .. မနေ့က ကျောင်းကုန်း လူထုတွေ့ဆုံပွဲက.. မသန်စွမ်းတပ်မတော်သားဟောင်းတစ်ဦးရဲ့ ခံစားခွင့်ငွေကိစ္စ မေးမြန်းချက် Video file .. Video Credit Myanmar State Counsellor Office Page
ရန်ကုန် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေ ခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး
ရေချိုးကန်ထဲမှာ နန်းသီရိမောင် ဘယ်လိုတွေတောင် Sexy ကျကျလှနေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်..... Fashion Magazine Myanmar Nang Thiri Maung Model Singer နန်းသီရိမောင် - Isabella
😘😘😘😘 ကဗျာတွေစီကာ အချစ်ဆုံးဖတ်ဖို့ နှလုံးသား စီကာ စကားလုံးများ....
စိတ်တွေ မရှည် တော့ ဘူးနော် 😁😀😛😂😂😂😂 Credit; Video
နှင်းဝေတဲ့ ဆောင်း... ဂျူဝယ်
[English below] မောင်ဆောင်းခ (ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေးကျူးလစ်ဆုရှင်) ဒီရဲဝင့်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်သူ လူငယ်လေးဟာ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ တက်ကြွစွာတိုက်တွန်းပြောကြားသူများထဲက တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ အသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အသံအဖွဲ့ နဲ့ အတူ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်တဲ့ ဥပဒေတွေ (ဥပမာအားဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေရဲ့ အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ) ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ တိုက်တွန်းပြောနေတာပါ။ ဒီလို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် ပိုမိုရရှိရေးနဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ပြောင်းလဲရေးများအတွက် တိုက်တွန်းပြောဆိုမှုများကို စနစ်တကျနဲ့ အထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ ချဉ်းကပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မောင်ဆောင်းခကို ကျွန်တော်တို့ ချီးမွန်းထောပနာ ပြုပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ သူ့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ဖြစ်တဲ့ မိမိတို့ ယုံကြည်ချက်ကို တင်ပြခွင့်နဲ့ တခြားလူတွေရဲ့ အသံကို နားထောင်ပေးတဲ့ အားလုံးပါဝင်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တန်ဖိုးထားတာပါ။ မောင်ဆောင်းခရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့မှုတွေကို ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ပြီး အားပေးလိုက်ကြရအောင် Maung Saungkha: poet, writer, activist and winner of the Human Rights Tulip Myanmar 2018. This young courageous human rights defender is one of the most outspoken advocates on Freedom of Expression in Myanmar. With his newly founded organization Athan (the ‘voice’) he advocates for reform of restrictive legislation (such as the anti-defamation section of the Telecommunications Law). We applaud Maung Saungkha for takingasystematic and evidence-based approach to promote Freedom of Expression and advocating for the reform of restrictive legislation. But most importantly, we support the value for which he stands:apluralist society where we do not only have the right to express views, but also learn to listen to others. Please watch the video and see for yourself the great and honorable work Maung Saunkha is doing in Myanmar.
YLJK Entertainment Page ကနေ သီချင်းတွေ MV တွေတင်တိုင်းအမြဲအားပေးနေကြပရိသတ်များအတွက် နိုဝင်ဘာလရဲ့ပထမဆုံးနေ့(First Nov ) မှာ Ye' Lay နဲ့Rio တို့ ရဲ '့လေးလုံး'သီချင်းလေးကို ထပ်မံတင်ဆက်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာ... #YLJKEnt #YELAY #RIO_RIZE #LAY_LONE
၂၀၁၈ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဒိုင်း ဗိုလ်လုပွဲမှာ ရန်ကုန်ကစားသမားတွေနဲ့ ကွင်းလယ်ဒိုင်တို့ ပြဿနာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်အချို့ကလည်း ကွင်းအတွင်းကို အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ပစ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အပြုအမူတွေက မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်တိုးတက်ဖို့ မဆိုနဲ့ မနိမ့်ကျသွားအောင် လုပ်နေရတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုမှာ ဆက်ရှိနေကြဦးမှာလား? အဖြေရှာဖို့တော့ လိုအပ်နေပါပြီ။ #DuwunSportsVideo
#epaselect People hold poster, placards and black air balloons with the images of jailed journalists duringaprotest demanding to free two Reuters journalists in front of the city hall in Yangon, Myanmar, 16 September 2018. EPAeuropean pressphoto agency-EFE/LYNN BO BO Lynn Bobo Dozens of Myanmar activists gathered in front of Yangon city hall and stagedaprotest demanding to free two jailed Reuters journalists. Myanmar court on 03 September 2018 sentenced Wa Lone and Kyaw Soe Oo to seven years in prison after they were found guilty of violatingastate secrets act while working onastory of the massacre by Myanmar armed forces. www.epa.eu Credit Lynn Bobo
သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့် မြန်မာ့ ရိုးရာဝိုင်းခြင်းလုံး ခတ်ခြင်းပြုလုပ်..
Burj Al Arab —7Star Hotel In Dubai
ရွှေပြည်သာပြည်သူ့ လွှတ်တော် အမတ် နှင့် မြေယာ ပြဿနာ ကို စစ်ဆေးစဉ် ခရိုနီကိုယ်စားလှယ် က ပွဲကြမ်း ◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾ ​​​မြေယာမှုခင်းဖွင့်​လှစ်​ စစ်​​ဆဲကာလအတွင်း မည်​သည့်​စီမံကိန်းမျှ အ​ကောင်​ထည်​​ဖော်​​ဆောင်​ခွင့်​မရှိသည့်​ အ​ခြေအ​နေကို ရန်​ကုန်​တိုင်းဒေသကြီး ​ရွှေပြည်​သာမြို့နယ်​ ​ကျောင်းကုန်​​ကျေးရွာတွင်​ လယ်​​ယာမြေထဲသို့အ​​ဆောက်​အဦး​ဆောက်​လုပ်​ရန်​ သဲများမှုတ်​သွင်း​နေမှုကို ​ရွှေပြည်​သာမြို့ပြည်​သူ့လွှတ်​​တော်​ကိုယ်​စားလှယ်​နှင့်​ ​ကျေးရွာအုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးတို့မှ (၁၉.၈.၂၀၁၈)ရက်​​နေ့တွင့်​ တိုင်​ကြားစာနှင့်​ပတ်​သက်​၍ ပဏာမအ​နေဖြင့်​ ကွင်းဆင်း​ကြ ည့်​​ရှု​နေစဉ်​ ခရိုနီတစ်​ဦးဖြစ်​သူ သရဖူဦးစိုးမြင့်​၏ ကိုယ်​စားလှယ်​မှ လွှတ်​​တော်​ကိုယ်​စားလှယ်​တစ်​ဦးအား ရိုင်းပြစွာပြုမူဆက်​ဆံခဲ့သည် ဟု သိရပါတယ် crd